Guddiga doorashada Galmudug oo digniin kasoo saaray sharciyadda xildhibaanadii lasoo doortay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddiga doorashada Galmudug oo digniin kasoo saaray sharciyadda xildhibaanadii lasoo doortay (AKHRISO)
War-saxaafadeed ay soo saareen guddiga doorashada dadban ee Galmudug iyo wakiilada guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa looga hadlay howlihii iyo hanaankii loo maray meel marinta doorashooyinkii dhawaan ka dhacay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay isku garab siinayaan sidii ay u carqaladeyn lahaayeen, qaar ka mid ah kuraastii lagu soo doortay magaalada Cadaado.
Ugu dambeyntii, guddiga doorashada dadban ee Galmudug ayaa ka digay in arrinkaasi ay keento cawaaqib xumo, iyagoona dhinaca kale baaq u diray madaxda madasha wadatashiga qaran iyo beesha caalamka inay arrinkaan soo fara geliyaan.
Guddiga doorashooyinka heer federaal iyo beesha caalamka ayaa dhawaan soo saaray war-saxaafadeed ay uga soo horjeedaan doorashada qaar ka mid ah kuraasta lagu soo doortay magaalooyinka maamul goboleedyada dalka.
Xubnihii Aqalka hoose ee dhawaan lagu soo doortay magaalada Cadaado ayaa la sheegayaa in shaki weyn laga qabo qaabkii lagu soo doortay, waxayna arrinkaan keentay in guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal uu xubnahaasi shahaadooyinkii xildhibaanimo u diido.